डेनमार्कले नेपाललाई १४ लाख डोज खोप दिन लागेको हो? :: Setopati
डेनमार्कले नेपाललाई १४ लाख डोज खोप दिन लागेको हो?
हिजो (आइतबार) डेनमार्कले नेपाललाई कोरोनाभाइरसविरूद्धको १४ लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भन्ने खबर बाहिर आयो। स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन प्रमुख भीमसिंह तिंकरीले डेनमार्कले नेपाललाई उक्त खोप दिन लागेको जानकारी दिए।
यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भने ठोस जानकारी छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णराज पौडेलले डेनमार्क नेपाललाई खोप दिन इच्छुक रहे पनि त्यो कति परिणाममा दिने भने टुंगो नभएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'डेनमार्कले नेपाललाई खोप दिन खोजेको छ तर त्यत्रो खोप दिने क्षमता छजस्तो छैन,' उनले भने, '१४ लाख डोजको कुरा आयो त्यो हाम्रो दोस्रो डोजको लागि चाहिने परिणाम हो। त्यसैले हामीले कुरा हुँदा त्यति मात्रा चाहिन्छ भनेर भनेको हुनुपर्छ। त्यसका लागि डेनमार्क र नेपालबीच इमेल साटासाट भने भएको छ।'
पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि यसबारे ठोस जानकारी नरहेको भन्दै प्रवक्ता पौडेलले भने, 'पराराष्ट्रको युरोप शाखा हेर्ने एक जना अधिकारीले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले पनि डेनमार्क खोप दिन इच्छुक रहेको तर कति दिने भनेर टुंगो भइनसकेको भनेर भन्नुभयो।'
उनले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग कुरा गर्दा पनि डेनमार्कसँग इमेलमा कुरा भइरहेको तर यति नै खोप दिने भनेर जवाफ नआइसकेको भन्ने जानकारी आएको जनाए।
स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन प्रमुख तिंकरीसँग भने सम्पर्क हुन नसकेको पौडेलले जनाए।
'मैले हिजोदेखि नै फोन गरिरहेको छु तर उहाँको फोन उठेको छैन,' उनले भने।
तिंकरीले युनिसेफसँगको सहकार्यमा डेनमार्कले नेपाललाई १४ लाख खोप दिने बताएका थिए। उनले सुरूमा कुरा गर्दा डेनमार्कको नेपाललाई खोप दिने अहिले मनसाय मात्र रहेको भन्दै फेरि अन्तमा १४ लाख खोप दिन लागेको जनाएका थिए। उनले डेनमार्कले दिने खोप एस्ट्रेजेनकाको रहेको पनि बताएका थिए।
डेनमार्कबाट १४ लाख खोप अनुदानमा आए एकै पटक नेपाललाई ठूलो मात्रामा खोप दिने डेनमार्क दोस्रो देश हुनेछ। अहिलेसम्म भारतले १० लाख र चीनले दुई पटक गरेर १८ लाख खोप नेपाललाई अनुदानमा दिएका छन्।
चीनले दिएको थप १० लाख खोप भोलि (मंगलबार) बाट ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूलाई लगाइँदैछ। यसअघि दिएको ८ लाख डोज भने लगाइसकिएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २४, २०७८, ११:०२:००